IIMPENDULO | Tianjin Yixin Pipe Izixhobo Co., Ltd.
Umbuzo oBuzwa qho
Q. Kutheni ibizwa ngokuba ngumbhobho yonke indawo ezenzekelayo umatshini iwelding?
A: Inokuqonda ukuwelda okuzenzekelayo nakwesiphi na isithuba semibhobho, njenge-welding ephezulu, i-welding ethe tye, i-welding ethe nkqo, i-welding ethe tyaba, i-circumferential seam welding, njl.njl. Ngumatshini wokuhambisa umbhobho oqhubele phambili ngoku. Umbhobho uzinzile okanye ujikeleze, kwaye itroli yokuwelda inokuhamba ngokuzimeleyo ukuze ifumane ukuzenzekelayo.
Q. Zithini ubukhulu bombhobho osebenzayo kunye nodonga lobunzima bomatshini?
A: Ifanelekile ngobubanzi bombhobho ngaphezulu kwe-114mm kunye nodonga ubukhulu be-5-50mm (HW-ZD-200 ilungele ukuthoba udonga lobunzima be-5-100mm).
Q. Ngaba i-weld ingafunyanwa yi-X-ray kunye ne-ultrasonic?
A: Ewe, kufuneka wenze i-GTAW ngesandla njengengcambu, izixhobo zethu zinokugcwalisa ngokuzenzekelayo kunye nekepusi. Inkqubo ye-welding ihambelana nokuhlolwa okunjengokufumanisa ukungalunganga kunye nokufota.
Q. Luluphi uqwalaselo kwizixhobo ezipheleleyo?
A: Isizukulwana sesihlanu sonke-indawo yokuma kwe-welding trolley, umthombo wamandla wokuwelda ovela ngaphandle, isilawuli socingo, isilawuli esingenazingcingo, itotshi yokuwelda kunye nezinye iintambo (i-YX-150 Pro kunye ne-HW-ZD-200 zidibanise itroli yokuwelda ene-welding feeder).
Q. Ngaba umatshini weld ukusuka eludongeni ngaphakathi?
A: Ewe, ubukhulu bepayipi kufuneka bube ngaphezulu kwe-1 yemitha, okanye ubukhulu bombhobho banele ukuba umqhubi angene kumbhobho.
Q. Yeyiphi irhasi kunye nocingo olusetyenzisiweyo olusetyenziswayo kwinkqubo yokuwelda?
A: Ikhuselwe yi-100% yekhabhon dayoksayidi okanye irhasi exubeneyo (i-80% ye-argon + engama-20% yekhabhon dayoksayidi), kwaye ucingo oludibanisa i-welding lu-cored okanye lubhobhoza.
Q. Zeziphi izibonelelo xa kuthelekiswa nokudibanisa ngesandla?
A: Ukusebenza kunokuba ngaphezulu kwe-3-4 welders; umthungo weld wenziwe kakuhle; Ukusetyenziswa kwezinto ezisetyenziswayo kuphantsi. Nokuba i-welder enolwazi olusisiseko lwe-welding inokuyisebenzisa kakhulu, igcina iindleko zokuqesha inani elikhulu leewelders eziqeqeshiweyo ngamaxabiso aphezulu.
Q. Ngaba ivili lemagnethi yetroli ye-welding iyamelana nobushushu obuphezulu? Yintoni amandla okuthengisa?
A: Sivavanye kwindawo enobushushu obuphezulu be-300 °, kwaye kwakungekho kuncitshiswa kwemagnethi, kwaye amandla okutsala omazibuthe anokuqhubeka nokugcina i-50kg.
Q. Njani ngaphezulu intloko iwelding bokwakha?
A: Ukuwelda ngaphezulu lolona hlobo lunzima lokunyibilikisa phakathi kwezi ndawo zine zokuwelda. Inemfuno eziphakamileyo kakhulu kulawulo lwesinyithi esinyibilikisiweyo, ngakumbi kwi-welding ephezulu yentloko. Inqanaba lesiqinisekiso kunye nokwenziwa kobunzima bobuchwephesha. Umbhobho we-Yixin zonke izixhobo zokuwelda ezizenzekelayo zinokusombulula iingxaki ezinxulumene noko, kwaye imilo ye-welding intle kwaye inqanaba elifanelekileyo liphezulu.
Q. Zeziphi iimeko zokusebenza ezilungele ukuhambisa umbhobho ngokuzenzekelayo?
A: Ngaphakathi okanye ebaleni (kwisiza) imisebenzi yokwakha inokusetyenziswa; imibhobho eshinyeneyo-ebiyelweyo, imibhobho emikhulu, imibhobho yesinyithi, i-flange welding, i-welding welding, i-welding yangaphakathi, i-welding yangaphandle, i-tank e-welding welding, njl.
Q. Ingasetyenziswa kwimeko engqongqo yangaphandle?
A: Ewe, yomelele kwaye yomelele, ngakumbi ifanele imeko yokusebenza enzima yobunjineli bombhobho.
Q. Ngaba izixhobo kulula ukuzisebenzisa? Uqeqesha njani?
A: Ufakelo lula kwaye umsebenzi ilula. Ungaqala ngeentsuku ezingama-1-2 ukuba une-welder esisiseko. Sinokubonelela ngoqeqesho kwi-Intanethi okanye kwindawo yoqeqesho kunye nesikhokelo.
Q. Ngaba zikhona iimfuno zemeko yokusebenza?
A: Indawo yokusebenza ifuna indawo engama-300mm ejikeleze umbhobho. Kukho umaleko wokugquma okanye wokugquma ngaphandle kombhobho, kuyacetyiswa ukuba wenze ngokwezifiso umkhondo. Kwimibhobho enobubanzi bepayipi enkulu kune-1000mm, kuyacetyiswa ukuba wenze ngokwezifiso umkhondo, itroli iqhuba ngokugudileyo, kwaye umgangatho wokuwelda uphezulu.
Q. Ingaba umzimba wetanki ungadityaniswa? Ngaba iwelding ethe tyaba yombhobho inokuma?
A: Ewe, nkqo okanye tye ukuwelda kunokwenzeka.
Q. Zeziphi izinto ezisetyenziswa ziphele zisetyenziswa kunye neenxalenye zokunxiba?
A: Izinto ezisetyenziswayo: ucingo lwewelding (ucingo oluluqilima lwe-welding wire okanye ucingo lwe-welding cored wire), igesi (i-carbon dioxide okanye igesi exubekileyo); iindawo ezinobuthathaka: iingcebiso zonxibelelwano, imilomo, njl. (Zonke iindawo eziqhelekileyo ziyafumaneka kwimarike yentsimbi).
Q: Loluphi uhlobo lwecingo olisebenzisayo? (ubukhulu, uhlobo)
A: Ucingo lweFlux: 0.8-1.2mm
Q: Ngaba kukho nawuphi na umatshini ojongana nombhobho ofunekayo kulungiselelwa iibevels zombhobho?
Q: Welding, loluphi uhlobo lwendibaniselwano olufunekayo (U / J kabini J / V okanye amalungu wotho?)
Q. Yintoni umthamo nobunzima betroli ye-welding?
A: netroli ukuwelda yi 230mm * 140mm * 120mm, kwaye ubunzima netroli yi 11kg. Uyilo ngokubanzi alunasidima kwaye luyaguquguquka ukuphatha / ukusebenza.
Q. Sithini isantya sokujija nobubanzi betroli ye-welding?
A: Isantya sokujija sihlala silungelelaniswa ukusuka kwi-0-100, kwaye ububanzi be-swing buyaqhubeka buhlengahlengiswa ukusuka kwi-2mm-30mm.
Q. Zeziphi izinto eziluncedo zeYixin izixhobo zombhobho ezizenzekelayo?
A: Inkampani ijolise kwi-R & D kunye nakwimveliso yezixhobo zombhobho ezizenzekelayo ze-welding ngaphezulu kweminyaka eyi-12, kwaye iphumelele kuvavanyo lwabathengi nakwiimarike. Imveliso iye yafumana izizukulwana ezi-5 zokuhlaziywa. Ukusebenza kwesixhobo esitsha sokudibanisa imibhobho kuzinzile, inqanaba lokufumana iwelding liphezulu, kwaye i-weld seam intle. Baninzi abalingisi kwimarike. Nceda ugcine amehlo akho evulekile kwaye uthelekise umgangatho.
Ngaba ufuna isisombululo esenziwe ngokwezifiso?